Metadata.io: Qalabaynta Abuurka Dhuumahaaga ee ABM | Martech Zone
Metadata.io: Qalabaynta Abuurka Dhuumahaaga ee ABM
Arbacada, Juun 3, 2020 Arbacada, Juun 3, 2020 Douglas Karr
Metadata waa madal madaxbannaan oo dalab ah oo hagaajinaysa kharashkaaga xayeysiiska bulshada iyo dijitaalka ah si ay kaaga caawiso inaad si dhakhso leh uga abuurto baahi tayo leh iyo dhuumaha koontooyinkaaga bartilmaameedka.
Aaladda gaarka loo leeyahay ee loo yaqaan 'AI' iyo mashiinka barashada mashiinka ayaa falanqeynaya xogta CRM taariikheed si loo aqoonsado cidda ay tahay inuu arko xayeysiintaada, ka dibna mashiinka tijaabinta noocyada kala duwan ayaa tijaabiya boqolaal kala duwanaansho isla markaana wuxuu ku fiicnaadaa waxa ugu wanaagsan ee u soo bandhiga natiijooyinka ugu fiican. Natiijadu waa dhuun tayo leh oo ka timaadda xisaabaadka bartilmaameedka si dhakhso leh loo soo saaro.
Metadata.io Platform Demo iyo Guudmarka
Aqoonsiga iyo Bartilmaameedka - Soo ogow kaalintaada macaan ee suuqgeyntaada. Samee dhagaystayaasha adoo adeegsanaya adeegsiga tikniyoolajiyadda, ujeedo iibsade, shirkad farsamoyeed, otomaatiga suuq geynta, iyo ilaha xogta CRM. Helitaanka 1.2 bilyan oo ah xiriiryada xiriirka.
Ka qaybgal iyo tijaabo - Tijaabi oo wax ka baro baaxadda. Metadata's AI waxay soo saartaa boqolaal tijaabooyin ah, sidaa darteed maahan inaad sameysid! Muuji isku-darka waxqabadka ugu fiican ee hal-abuurka, dhagaystayaasha, iyo natiijooyinka ku lug leh xisaabaadkaaga.
Hesho oo Beddel - Aqoonsiga dalabka, u hagaaji dakhliga, oo ku celi. Waxqabadka, soo gudbinta sheegashada ee ku saleysan dhuumaha la soo saaray, ka qeyb qaadashada koontada, dhuumaha jira ayaa saameyn ku yeeshay, iyo inbadan.
Barmaamijka 'Metadata' wuxuu si otomaatig ah u kobciyaa hogaamiyaasha ka hor inta uusan ku miisaaminin Suuqgeyntaada Suuqgeynta ama CRM Platform, taasoo dhalisay habeyn shaqo hoggaamineed oo beddelid leh xog tayo sare leh.
Leadsift iyo Isdhexgalka Metadata
Isbeddelkii ugu dambeeyay ee ka-socdaalka guriga ayaa caqabad xiiso leh u keenay Suuqleyda Dijital ah ee ku tiirsan teknoolojiyada khariidaynta cinwaannada IP-ga ee booqdayaasha aan la garanayn ee shirkadaha u soo dira, laakiin cinwaannada IP-ga ee guryaha lagu qoro kuma aqoonsana aqoonsiyadooda shirkadeed. Tani waxay adkeyneysaa in si sax ah loo fuliyo ololayaasha ABM, taas oo ah mudnaanta koowaad ee B2B Marketers.
LeadSift ayaa ku dhawaaqday iskaashi istiraatiiji ah MetaData.io si looga caawiyo B2B Marketers inay u ololeeyaan ololeyaal dijitaal ah iyagoo aan ku tiirsaneyn IP Matching.
Adoo adeegsanaya astaamaha ujeedka ka imanaya LeadSift, macaamiisha Metadata hadda waxay laser-ka-bar-tilmaameysan karaan iibsadayaasha liistada akoontadooda bartilmaameedka iyagoo adeegsanaya aqoonsiyo sida cinwaanka iimaylka, taas oo ah hab aad u waxtar badan oo lagu bar-tilmaameedsado xirfadleyda B2B maadaama ay si joogto ah uga shaqeeyaan guryahooda.
Gil Allouche, agaasimaha guud Metadata.io
Iyadoo la adeegsanayo astaamaha shabakadda LeadSift - suuqleyda ayaa hadda mudnaanta siin kara liistada akoontadooda bartilmaameed iyo xiriirada, waxayna si otomaatig ah ugu gaarayaan iyaga oo isticmaalaya barnaamjiyada jiilka madaxbannaan ee Metadata, dhammaantood iyagoo aan ku tiirsaneyn cinwaanka IP u dhigma
Buug Demo ee Metadata.io
Tags: abmbomboraCRMdhagaystayaasha facebookfirmographicpage degteyjiilka ledLinkedInfiirso dhagaystayaashasuuqometadata.iodhuuntaiibiniibiyaha xoogga crm
Facebook Wuxuu Burburiyey Wadahadal Xushmad iyo Furan… waana la dhammeeyey
TestFlight: Tijaabinta Beta iOS iyo La Socodka Barnaamijka Live